technology entsha imd China OEM electroplated Umthengisi case siko phone
Supply Amandla: 10000 Piece ngosuku
Imiqathango Intlawulo: T / T PayPal
Previous: iimveliso OEM ityala elitsha ngelaphu ifowuni ye iphone series mobile
Okulandelayo: professional imd mobile ecacileyo AKA bumper cover zefowuni iphone
IML (In-Ikubumbe Label) yi iteknoloji entsha kwenzeka ifoni ukuba ukushicilela ipateni PET mboniso isitofu.
IML i edition uphuculo of IMD (In-Ikubumbe Decoration)
Ingaba umnini womzi-mveliso okanye urhwebo inkampani?
Thina ke umenzi IML yobungcali ingqalelo iteknoloji IML kangangeminyaka eli-10 yamava. Ekubunjweni ku Printing, Ndiyila, Inaliti, Inspection, Ukupakisha. ziya kugqitywa umenzi yethu onke amanqwanqwa amaninzi.
Yintoni na kakhulu ngetoti?
Thina eziphambili ukuvelisa iimveliso series IML. Kuquka ityala IML phone, panel yefowuni IML, panel IML digital, panel IML ibhanki amandla panel.IML iwotshi smart, panel IML kumatshini wokuhlamba, panel IML cooker yombane, njl
Ngaba ukunikezela ngenkonzo OEM?
Thina umenzi OEM professional iminyaka elishumi kushishino technology IML.
Nceda uthumele imfuneko yakho ifayile yoyilo umzobo kunye nathi ukwenza ukungunda kuwe.
Ngenxa yeesampulu zethu ngoku uya kuba iiklayenti kunye neemfuno iisampulu bethu bokuprinta kuya kufuneka ukuba uhlawule.
2-3days iisampulu kunye 3-5days ukuba umyalelo. I impahla enkulu siya kuba umthamo wakho.
Imd Phone Case Inkampani
Imd mfono Case Factory
Imd Manufacturers Case mfono
Imd mfono Case Products
Imd Suppliers Case mfono
Imd mfono Case Ulwenziwo lokuthile
Case Phone Galaxy S7
Case Phone J7 Samsung
Case mfono S7
* Prince: Nceda ukhethe Truck